Mugumo Wenyika Wava Pedyo Here?
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe (North Central) Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Mwari acharega vanhu vachidzvinyirira vamwe uye vachikanganisa ramangwana revanhu vese here? Kwete. Sezvatatoona, achapindira ogumisa kutambura neudzvinyiriri zvanetsa vanhu kwemazana emakore. Musiki wevanhu uye wenyika anoda kuti uzive kuti nguva yake yekugadzirisa zvinhu yave kusvika. Anozivisa sei mashoko iwayo anokosha?
Chimbofunga izvi: Ngatitii unoda kuenda nemotokari kune imwe nzvimbo yausingazivi. Unogona kutarisa paIndaneti, mamepu kana kuti zvimwe zvinyorwa, kuti uzive kuti ungafamba sei. Paunoona zvikwangwani zvomumugwagwa, nezvimwe zviratidzo zvinoenderana nezviri pamepu yako, unobva waziva kuti wava kusvika. Saizvozvowo, Mwari akatipa Shoko rake iro rakagara ratsanangura zvinhu zvikuru zvaizoitika munyika yose. Patinozviona zvava kuitika, tinobva taziva kuti mugumo wava pedyo.
Bhaibheri rinotsanangura kuti nguva yaizosvika paizochinja zvinhu munyika yose, mugumo wobva wasvika. Panguva iyoyo, maitiro evanhu nemaitikiro ezvinhu munyika yose zvaizosiyana zvachose nezvakamboitika kare munhoroondo yevanhu. Chimbofunga zvimwe zvacho zvinotaurwa neShoko raMwari.
1. KUSAGADZIKANA KWEZVINHU MUNYIKA YOSE Uprofita huri pana Mateu chitsauko 24 hunotaura nezvechiratidzo. Chiratidzo ichi hachisi chinhu chimwe chete asi zvinhu zvakasiyana-siyana zvaizoitika panyika. ‘Ndechekuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho’ uye chinosvitsa vanhu ‘pamugumo.’ (Vhesi 3 ne14) Chiratidzo chacho chinosanganisira hondo dzinotyisa, kushomeka kwezvokudya, kudengenyeka kwenyika munzvimbo nenzvimbo, kuwedzera kwekusateerera mutemo, kushayikwa kwerudo, neunyengeri hunoitwa nevafundisi vachitsausa vanhu. (Vhesi 6-26) Ndizvo hazvo kuti zvinhu izvi zvava nemazana emakore zvichiitika. Asi mugumo paunenge uchiswedera pedyo, zvinhu izvi zvinoitika panguva imwe chete. Panguva iyoyo panoitikawo zvinhu zvitatu zvinotevera.
2. MAITIRO EVANHU Bhaibheri rinotaura kuti “mumazuva okupedzisira,” kureva nguva ichatisvitsa pamugumo, maitiro evanhu aizowedzera kuipa. Tinoverenga kuti: “Vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvitutumadza, vanozvikudza, vanomhura, vasingateereri vabereki, vasingaongi, vasina kuvimbika, vasina rudo rukuru rwokuzvarwa narwo, vasingambodi kubvumirana, vanochera vamwe, vasingazvidzori, vanotyisa, vasingadi zvakanaka, vatengesi, vakaoma musoro, vanozvitutumadza nokuda kwokudada, vanoda mafaro panzvimbo pokuda Mwari.” (2 Timoti 3:1-4) Ndizvo hazvo kuti vanhu vakabvira kare vasingaremekedzi vamwe, asi izvi zvaizonyanya “mumazuva okupedzisira.” Ndokusaka mazuva acho achinzi inguva “dzinonetsa dzakaoma kubata nadzo.” Uri kuvaonawo here vanhu vane maitiro akadai?
3. NYIKA IRI KUPARADZWA Bhaibheri rinoti Mwari achaparadza “vaya vanoparadza nyika.” (Zvakazarurwa 11:18) Vanhu vaizoparadza nyika sei? Izvi zvakamboitika munguva yaNoa. “Nyika yakashatiswa pamberi paMwari wechokwadi uye nyika yakazara nechisimba. Naizvozvo Mwari akaona kuti nyika yakanga yashatiswa.” Saka Mwari akataura nezvevanhu ivavo vakaipa achiti: “Ndiri kuvaparadza.” (Genesisi 6:11-13) Uri kuona here uchapupu hwakawanda hwekuti nyika iri kuzara nechisimba? Vanhu vanogona kuparadza nyika nenzira dzakati kuti. Vanogona kuuraya vanhu vose vari panyika. Vanotova nezvombo zvinokwanisa kuita izvi. Uyewo zvishoma nezvishoma vanhu vari kukanganisa zvinhu zvinoraramisa zvipenyu zvose zviri panyika. Izvi zvinosanganisira mhepo yatinofema, kudyidzana kwemhuka nemiti uyewo makungwa.
Zvibvunze kuti, ‘Makore anoti pfuurei 100 adarika, vanhu vaiva nesimba rokuparadza nyika yose here?’ Iye zvino vava naro nokuti vari kuunganidza zvombo zvine simba uye vari kuparadza zvakatipoteredza. Unyanzvi hwokugadzirwa kwezvinhu huri kuwedzera uye zvava kutoita sokuti vanhu havachazivi kana kuti havakwanise kugadzirisa zvinozokonzerwa nezvavari kugadzira. Zvisinei, ramangwana renyika harisi mumaoko evanhu. Zvinhu zvose zvipenyu zviri panyika zvisati zvatsakatiswa nevanhu, Mwari achavaparadza. Ndizvo zvaakavimbisa!
4. BASA ROKUPARIDZA MUNYIKA YOSE Chimwewo chinoratidza kuti mugumo wava pedyo ibasa guru raizoitwa munyika yose: “Aya mashoko akanaka oumambo achaparidzwa munyika yose inogarwa kuti ave uchapupu kumarudzi ose; uye zvadaro kuguma kuchasvika.” (Mateu 24:14) Basa iri rokuparidza raizosiyana nekure nezvange zvichiitwa nemachechi akawanda kwemazana emakore pakutendeutsa vanhu. “Mashoko akanaka oUmambo” ndiwo aizoparidzwa zvakasimba mumazuva okupedzisira. Pane here chechi yaunoziva inoparidza mashoko aya akanaka? Kunyange kana paine vanhu vanoita sevari kuparidza mashoko aya, vari kuaparidza “munyika yose inogarwa kuti ave uchapupu kumarudzi ose” here?
Umambo hwaMwari huri kuparidzwa munyika yose mumazana emitauro
Nzvimbo yepaIndaneti inonzi www.jw.org ine “mashoko akanaka oUmambo.” Ine zvinyorwa zvinotsanangura mashoko iwayo mumitauro inopfuura 700. Pane vamwe here vaunoziva vane zvavakamboitawo kuti vaparidze mashoko akanaka munyika yose seizvi? Kare kare Indaneti isati yatombovako, Zvapupu zvaJehovha zvaizivikanwa nekuparidza mashoko akanaka eUmambo hwaMwari. Kubvira muna 1939 kavha imwe neimwe yeNharireyomurindi yakatanga kunyorwa mashoko okuti “Yokuzivisa Umambo hwaJehovha.” Rimwe bhuku rinotaura nezvemachechi rakataura nezvebasa rokuparidza rinoitwa neZvapupu zvaJehovha richiti, “zvinoita sokuti hapana vamwe vakamboriita nemazvo uye munzvimbo dzakawanda kudaro.” Zvapupu zvinoparidza mashoko akanaka okuti munguva pfupi iri kuuya Umambo hwaMwari huchaita kuti ‘mugumo usvike.’
NGUVA ISINA KUMIRA ZVAKANAKA MUNHOROONDO YEVANHU
Uri kuzviona here kuti zvinhu izvi zvina zvinotaurwa neBhaibheri zvatakurukura munyaya ino zvange zvichiitika uchitozvionawo iwe pachako? Magazini ino yava nemakore anopfuura 100 ichiudza vanhu nezvezvinhu zviri kuitika munyika yose kuti vazvionere vega kuti mugumo wava pedyo. Zvisinei, vamwe havabvumirani nazvo vachiti zvinobva pakuti ari kuzvitsanangura ndiani, uye zvinogona kuwedzeredzwa. Vanoti sezvo nzira dzekufambisa nadzo mashoko dziri kuwedzera, zviri kuita kuti vanhu vangoona sekuti zvinhu zviri kuwedzera kuipa munyika yose. Pasinei neizvi, zvinhu zviri kuramba zvichichinja zvazvisati zvamboita, zvichiratidza kuti tava kuenda kumugumo.
Dzimwe nyanzvi dzinoti pane zvakawanda zvichachinja panyika munguva pfupi yava pedyo. Somuenzaniso, muna 2014, veScience and Security Board yemagazini yeBulletin of the Atomic Scientists vakanyevera sangano reUnited Nations Security Council kuti pane zvakawanda zvinogona kuuraya vanhu vese panyika. Masayendisiti iwayo akataura kuti: “Kunyatsoongorora zvose izvi kunotiratidza kuti kufambira mberi kuri kuitika panyaya dzekugadzirwa kwezvinhu kunogona kukanganisa magariro evanhu chero nguva.” Vanhu vakawanda vari kubvumawo kuti nguva yatava haisisina kumira zvakanaka. Vanyori vemagazini ino nevaverengi vayo vakawanda vanobvuma kuti tava mumazuva okupedzisira uye kuti mugumo wava pedyo. Haufaniri hako kutya zvichaitika pachasvika mugumo asi unotofanira kufara. Sei tichidaro? Nokuti unogona kupona pachasvika mugumo!
ZVAPUPU ZVINOPROFITA NEZVEKUPARADZWA KWEPASI RINO HERE?
Kwete. Vava nemakore anopfuura 100 vachiudza vanhu mashoko akanaka nezveramangwana. Somuenzaniso, pagungano ravo ravakaita muna 1958, vakatsanangura musoro waiti, “Umambo hwaMwari Hunotonga—Kuguma Kwenyika Kwava Pedyo Here?” Vakati, “Umambo hwaMwari hunouya kuzoparadza vanhu vanoteerera Satani, kwete pasi redu. Umambo hwaMwari hauuyi kuzororomesa nyika ino nemoto, asi huchaita kuti kuda kwaMwari kuitwe panyika pano sezvakunoitwa kudenga. Ichi ndicho chikonzero chinoita kuti nyika ino yakasikwa naMwari irege kuparadzwa; uye achaita kuti irambe iripo nekusingaperi.”